यस्ता छन् भुँडी घटाउने सरल घरेलु उपायहरु, जानी राखौ
जुलाई 31, 2019 जुलाई 31, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments	पेट, भुँडी
मानिसलाई नमोटाउन्जेल मोटाउने रहर हुन्छ र दुब्लाएको पिरलो । तर जब मान्छे मोटाउन थाल्छ तब फुक्दै गएको भुँडी विस्तारै घाँडो बन्दै जान्छ । वास्तवमा बोसो थुपि्रँदै जाँदा पेट बढ्न थाल्छ । बोसोयुक्त लम्बोदर भुँडी अस्वस्थ जिवनशैली तथा गलत खानपान व्यवहारबाट सिर्जित खराब उपहार हो ।
बोसो जमेको ठूलो भुँडीले केवल तपाइँको छविमा आँच पूराउने मात्र हैन विभिन्न खाले स्वास्थ्य समस्याकेा जोखिम समेत बढाउँछ । त्यसैले पेटमा जमेको बोसो तथा बढेको भुँडी घटाउन तर्फ लाग्नैपर्छ । यसका लागि खानै नखाने वा खाएपछि वान्ता गर्ने जस्ता हानिकारक विधि अनुपयुक्त हुन्छन् ।
भुँडी घटाउने सरल घरेलु उपायहरु
१. आफ्नो दैनिकी कागतीको रसबाट सुरु गर्नुहोस्
मनतातो पानीमा कागती निचोरेर रस राख्नुहोस् र केही नुन समेत थप्नुहोस् । यसरी बनाइएको कागती पानीलाई हरेक विहान पिउने गर्नुहोस् । यसले पेटको बोसो घटाउने मात्र होइन पाचन क्रिया पनि नियमित गर्छ ।
२. बढि भात खाने बानी त्याग्नुहोस्
भातको सातो गहुँको पिठोबाट बनेका रोटी तथा अन्य परिकार, मकैको च्याँख्लाको भात, ब्राउन राइस खाने गर्नुहोस् ।
३. चिनिजन्य परिकार त्याग्नुहोस्
चिनिजन्य परिकार जस्तै मिठाइ, चिनियुक्त गुलियो डि्रंक्स, तथा तेल बढि मात्रामा भएको परिकार नखानुस् ।
४. प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनुहोस्
एकैचोटी धेरै पानी पिने र लामो समय पानी नपिउने नगरि नियमित रुपमा केही समयको अन्तरालमा पानी पिउने गर्नुपर्छ । यसले उपापचयनलाई सन्तुलित गराउने तथा सरीरमा रहेका विषाक्त पदार्थ समेत उत्सर्जन गर्नमा सहयोग पूराउँछ ।
हरेक विहान २-३ केश्रा काँचो लसुन चपाउनुहोस् र त्यसपछि कागती पानी खानुहोस् । मासुजन्य तथा बोसोयुक्त परिकारको सेवन अत्यन्तै कम गर्नुहोस् ।
६. शाहाकारी जीवनशैली अपनाउनुहोस्
हरेक विहान तथा बेलुकी फलफूल खाने गर्नुहोस् । यसले भोक कम गर्ने मात्र नभै सरीरमा आवश्यक एन्टीअक्सिडेन्ट, भिटामिन तथा लवणको आपूर्ति गर्दछ ।
७. उचित मसला प्रयोग गर्नुहोस्
तरकारीमा अदुवा, लसुन, मरिच तथा दालचिनी जस्ता मसला राखेर पकाउनुहोस् । यसले इन्सुलिन प्रतिरोधी क्षमतामा सुधार गर्नुका साथै रगतमा रहेको सुगर लेभल समेत सन्तुलन गर्दछ । (एजेन्सीको सहयोगमा)
← भुलेर पनि यौन सम्बन्ध राख्न नहुने यी महिलाहरु
स्वास्थ्यको लागि पिस्ता खानुका फाइदाहरू →
जुलाई 16, 2019 अगस्ट 27, 2019 साइन्स इन्फोटेक	4